PMU သည်သမိုင်းဝင်ပရိသတ်ဖြစ်သည်, ထို့အပြင်အလောင်းအစားများအားလုံးကိုအပြည့်အဝပေးထားသည်. ထို့အပြင်၎င်း၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုခိုင်မာစေရန်, ထို site သည်ဖဲချပ်ဝေနှင့်ပတ်သက်သောအပိုင်းတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားသည်.
PMU သည်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီဖြစ်ကြောင်း Quinte quartet ၏သုံးပုံတစ်ပုံမျှသာမဟုတ်တော့ပါ, စားပွဲ၌ကြီးမားတဲ့ Dede ပါသော PMU ဘားတန်း.
ငါတို့သည်ဤဆောင်းပါး၌, ကျနော်တို့မြက်သို့မဟုတ်ဖဲချပ်အကြောင်းကိုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. ထို့ကြောင့်, ငါတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပြောတာ, နှင့်အဘယ်သို့ကျွန်တော်တို့ကိုစိုးရိမ်ပူပန်, PMU လောင်းကစားခြင်း.
အဆိုပါ site ကိုမှန်မှန် updated ဂရပ်ဖစ်ဖြစ်ပါတယ်. ထို့အပြင်အမြင်အာရုံကိုရုပ်သိမ်းခြင်းသည်ဒီဇိုင်းအဟောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမှန်တကယ်အောင်မြင်မှုရှိသည်မှာရှင်းနေပါသည်.
သို့သော် site ပေါ်တွင်အမြဲလွယ်ကူသောသွားလာမှုမဟုတ်ပါ. တစ်ခါတစ်ရံ, ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့်အရာကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ထို site သည်နှောင့်နှေးမှုအနည်းငယ်ရှိနိုင်သည်.
ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိသော်လည်း ID, အသုံးပြုရန်နာကျင်မှုမရှိ. သို့သော်, တောက်ပသောအောင်မြင်မှုရနိုင်သောလက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများ. ဤအလောင်းအစားတွင်အားနည်းချက်များကိုတွေ့ရသည်မှာစကြာ ၀ ofာ၏ချွတ်ယွင်းချက်ဖြစ်သည်, အားကစားနှင့်ဖဲချပ်ဝေသည်တစ်ခါတစ်ရံကွဲသွားသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မဆိုပြwithoutနာများမရှိဘဲတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်.
ဤသည်မှာအသေးစားအားကစားအမျိုးသမီးများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်. အားကစားအားလုံးသည် PMU တွင်ရှိသည်, ဂေါက်သီးလား, ဘိလိယက်သို့မဟုတ်ဘေ့စ်ဘော; ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ရှိကြ၏.
ဒါဟာအိုလံပစ်အားကစားအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ကြောင်းရှင်းပါတယ် (ခြံစည်းရိုး, ဂျူဒို, မြင်းစီးအားကစား, ဟော်ကီ ... စသည်တို့), ဒါပေမယ့်လည်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်၏သူတို့အား (နှင်းလျှောစီး, ဇီဝဗေဒ, ကောက်, bobsleigh ... စသည်တို့) ကိုယ်စားပြုကြသည်.
ဒါပေမယ့်ဘောလုံး, တင်းနစ်, တောင်း - ဘောလုံး, အဓိကအားကစားရပ်ဂ်ဘီနှင့်လက်ပစ်ဘောလုံး, ဝေးမှုမရှိခြင်းကိုထံမှ.
pmu.fr တွင်သင်သည်အဓိကပြိုင်ပွဲအားလုံးအပေါ်လောင်းနိုင်သည်. ဒီတော့, ကမ္ဘာ့ဖလား, ယူရို, ချန်ပီယံလိဂ်, ယူရိုပါလိဂ်, ပရီးမီးယားလိဂ်, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြင်သစ်ချန်ပီယံပင် 1 နှင့်လိဂ်2ဟုတ်တယ်.
ဟုတ်ပါတယ်, သင်တို့သည်လည်းအမျိုးသားရေးချန်ပီယံနှင့်ခွက်တွေအများကြီးဖြစ်လိမ့်မည်, ဘာမှမရှိဘူး.
အလားတူပင်, pmu.fr ရှိတင်းနစ်အတွက် Roland Garros သို့မဟုတ် Wimbledon နှင့်အခြား Grand Slam ပြိုင်ပွဲများနှင့် ATP နှင့် WTA ပြိုင်ပွဲများကိုလောင်းနိုင်သည်။.
သင်တစ် ဦး ရပ်ဂ်ဘီပန်ကာဖြစ်လျှင်, သင်သည်ကမ္ဘာ့ဖလားတွင်လောင်းနိုင်သည်, ခြောက်နိုင်ငံ, မီးဖိုနိုင်ငံများ, TOP 14 နှင့်များစွာသောအခြားပြိုင်ပွဲရရှိနိုင်ပါသည်.
ယူနိုက်တက်စတိတ်၏ဝါသနာရှင်, သငျသညျ PMU အပေါ်အများအပြားညနေခဲ့ရသည်. NFL နှင့်အတူ (အမေရိကန်ဘောလုံး, နှင့်ဘေ့စ်ဘော, ရေခဲပြင်ဟော်ကီ (LNH) နှင့်သင်တန်း၏ NBA, သင်အကြိုက်ဆုံး paris ယှဉ်ပြိုင်မှုတွင်မတူညီသောရွေးချယ်စရာများရှိသည်.
အထူးသဖြင့်တစ်ခုချင်းစီကိုဂိမ်းသည်, ပျမ်းမျှကစားပွဲ (၆၀) တွင်ကစားပွဲမတိုင်မီရရှိနိုင်ပါ, ဆန့်ကျင် 30-40 ဆိုဒ်များအများစုမှ.
အလောင်းအစားအတော်များများရှိသည်, သင်ပွဲနိုင်သူကိုသင်လောင်းနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး. သငျသညျရည်မှန်းချက်ကိုပိုမိုသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းအလောင်းအစားနိုင်ပါတယ် (သို့မဟုတ်အမှတ်) ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းသူ, မသန်မစွမ်း paris, အလောင်းအစားမဟုတ်ပါ
တိုတောင်း, ဖြစ်နိုင်ခြေကြီးမားဖြစ်ကြသည်, သင်နှစ်သက်သောအလောင်းအစားများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်.
ထို့အပြင်ဂိမ်းများစွာတွင် PMU အလောင်းအစားများရှိသည်, မကြာခဏစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုနှင့်မကြာခဏ. Pmu သည်အလွန်ပြည့်စုံသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးသောအလွန်ပြီးပြည့်စုံသော site တစ်ခုဖြစ်သည်. အဓိကအွန်လိုင်းအကူအညီနှင့်အွန်လိုင်းစကားဝိုင်း7ရက်ပေါင်း / 7.
ကြိုဆိုပွဲပရီမီယံသည် 100 ယူရိုသည်အားကစားအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်. ဒီအပိုဆုကအများကြီးပိုမြင့်တဲ့နံပါတ်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်, လျှင် Turf နှင့် Poker အပိုဆုဂိမ်းနှင့်အတူ stack. ၎င်းသည်အလွယ်တကူနှင့်အန္တရာယ်မရှိဘဲ ၀ င်ငွေရရှိနေဆဲဖြစ်သည်.
ဤသည်မှာ PMU တွင်သင်လောင်းနိုင်သောကစားနည်းဖြစ်သည်, သငျသညျအပြည့်အဝစာရင်း http တွေ့လိမ့်မည်://www.pmu.fr/sport နှင့်အသေးစိတ်ရှင်းပြနိုင်သောဗီဒီယိုများ.
ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ပါရီမြို့အချို့ပိတ်ပင်ထားသည်ကိုသတိပြုပါ, ဂိမ်းအချက်အလက်များပါဝင်သောအထူးသဖြင့်သူတို့အား (ပထမ ဦး ဆုံးအဝါရောင်ကဒ်, 1 သော့), မည်သည့်ပြproblemsနာမျှမရှိဘဲဂိမ်းပေါ်တွင်ရှိသူများ (ပိုမိုသိရှိလိုပါက). ဒါကကန့်သတ်လိမ်လည်မှုမှာဖြစ်ပါတယ်.
ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတည်းထက်ပိုသောရလဒ်များရှိသည်ကိုသိရှိထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် 50 000 paris (အရင်းအမြစ်) နှင့် 90% ရိုးရှင်းသောအလောင်းအစားများဖြစ်ကြသည်. အခြားအမျိုးအစားများလည်းထိန်းချုပ်မှုလျှင်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနိုင်ပါတယ်.
Next Next post: PMU အပိုဆုကြေး